ILake Harriet, iMinneapolis: Umzila wokuhamba kunye neNdlela yeBhasi
Isikhokelo esibalulekileyo kwiLinneapolis 'iLake Harris
ILake Harriet liziko elihle kakhulu nelithandwa kakhulu elisezantsi eMinneapolis. I-echibi lijikelezwe ngamagquma ajikelezayo, imithi, ipaki, kunye negadi kwaye iqulethe iikhilomitha ezintathu zeemjikelezo kunye neendlela ze-skater, kunye ne-2.75-mile umzila wabahambahamba kunye nabagijimi.
Kwiveki ezininzi zasehlotyeni nasebusuku, kukho ikhonkethi, ukusebenza, okanye olunye uhlobo lokuzonwabisa kwiLake Harriet Bandshell, ngaselunxwemeni lolunxwemeni (apho i-East Lake Harriet Parkway kunye neWest Lake Harriet Parkway zidibana).
Iimbopheleleko zinodonga lweglasi ukuze abahamba ngeenqanawa kunye nabanqwelisi basemgodini nabo banokubukela ukuzonwabisa kwi-echibi.
ILake Harriet Bandshell yinto engenangqiqo. Iimbopheleleko zokuqala, ezakhiwe ngo-1888, zitshiswa phantsi, njengoko zatshintshwa. Isithwathwa sesithathu satshatyalaliswa sisiqhwithi ngo-1925. Isithintelo sesine, ekufuneka sibe yindawo yokutshintshwa kwesikhashana, sasimi iminyaka engamashumi amathandathu, kwada kwachithwa ngowe-1985 kwaye i-bandhell ​​enamehlo enqamle namhlanje ewakhiwe.
Imisebenzi eyongezelelweyo kunye neZenzo
ILake Harriet yindawo eyaziwayo yokukhupha nokuhamba ngomkhumbi. I-Lake Harriet Yacht Club ehamba ngeLake Harriet, kunye neenqanawa, i-kayaks kunye neekhenyane zingabhalwa.
Iklabhu ye-yacht iphinde ibonge iintlanga ngeeveki, kunye nee-regattas kunye nezinye iziganeko kwi-echibi.
Ngethuba lika-Apreli no-Meyi, iintaka ezifudukelayo zenza i-stopover kwi-Thomas Sadler Roberts Bird Sanctuary eneendawo zokukhusela ukugcina iintaka zeentaka.
ILake Harriet inamabhankini amabini, ababini abanobugcini bobukhosi abakho ngexesha lehlobo.
Inxweme yaseNyakatho ibonisa ukuhamba okufutshane ukusuka kwiintambo kunye neentambo zokugcina abagijimi kunye nabanqanawa. Ibhantshi yesibini, iSouth-East Beach, inqabile kwaye ihamba nje emfutshane ukusuka eNorth Beach.
Ngasemzantsi-ntshona kweLake Harriet, kumacala omabili kaRoseway Road, yiLyndale Park Gardens, kunye neendawo eziligadi.
I-Rose Garden esemthethweni ineentlobo ezininzi zeerose. Kukho noMyezo woKhuseleko, umyezo wamatye, iNgqungquthela Yonyaka / iNgqungquthela, kunye neHlabathi leMvavanyo elingapheliyo.
Khangela i-Elf House kwisiseko somthi omncinci kunye nomyezo omncinci otyalwa ngapha phakathi kwebhayisikili kunye neendlela ezihambahambayo, nje kuphela kwiSouth Oliver Avenue. Ummango wendawo uthi amanqaku asele emthini ukuze i-elf ihlale iphendulwa ngomyalezo.
I-Como-Harriet Streetcar Line iyingxenye encinane yokuhlala kwimizila yamatrol eyayikhawuleza ijikeleze eMinneapolis naseSt. Paul. IiTrolleys zihamba phakathi kolwandle olusentshonalanga yeLake Harriet (e-Queen Avenue South nase-West 42nd Street) kwiLake Calhoun (i-Richfield Road ngasemzantsi kwe-West 36th Street) kwiinyanga zasehlobo.
Kukhona indawo yokupaka kwiindawo zokupaka, kwindawo yokupaka esitaleni kufuphi ne-bandhell, kunye neenxa zonke kwelabi.
Izitolo ze-Ski ne-Snowboard eMinneapolis naseSt. Paul
Iindawo eziyingozi eMinneapolis
Umculo wamahhala, iTheater kunye nezoLonwabo eMinneapolis naseSt. Paul
Izibane zeeholide kwiidolophu zaseTwin ngo-2017
I-Nicollet Mall: Ukuthengwa, iiNtlanzi, iiTonwabo kunye neeNdwendwe
USt. Paul Jail - Intolongo eSt. Paul naseRamsey County
KwiSikhumbuzo seSonto leSikhumbuzo se-2010 eBaltimore
Isikhokelo kwiSixeko soKhenketho kunye nezotyelelo kwiLoire Valley
I-Las Vegas 'I-Big Apple Roller Coaster iyatshintsha
Indlela yokukhetha iSicwangciso sokutya seKharbia saseCaribbean
Iindawo zokuHlala eziPhambili, iiDolophu, kunye nemizi yaseFransi
I-Sandestin iGalofu kunye neNxweme yaseBhangi
Okthoba Imozulu kwiSouth-mpuma ye-US
Iifoto kunye neSanta kunye neLots Ngaphezu kwe-2016 uKrisimesi Ukuzonwabisa KwiiFenix
Liliphi ixesha elifanelekileyo lokuya eHawaii?
Isiqithi sase Shangri-la, eHong Kong soMbini onothando
Iinkcukacha zeeFowuni zeErgeria kwiItali
Imisebenzi yokuzonwabisa yamahhala e-San Diego (Ngaphandle kweBhangi!)